अस्वस्थ भएपछि प्रचण्ड मेडिसिटी अस्पताल भर्ना ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
अस्वस्थ भएपछि प्रचण्ड मेडिसिटी अस्पताल भर्ना ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्पताल भर्ना भएका छन् । रक्तचाप बढेपछि उनी ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् ।
‘अहिले अवस्था सामान्य रहेको र चिकित्सकका सल्लाह अनुसार केही घण्टा आराम गराई डिस्चार्ज गरिनेछ’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।
पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ठुलो झड्का लागेको छ ।
नेकपामा ओलीलाई कार्वाही गरेर पार्टी र सरकार कब्जा गर्ने योजना बनाएका दाहाललाई सर्वोचव आदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र व्युतिाइदिएपछि पर्नु सकस परेको छ ।
यो पनि, उसै त सानो दल त्यसमाथी पनि आफ्ना १५ सांसदले साथ छोडेपछि प्रचण्डलाई ठुलो झड्का लागेको हो । अरुको पार्टी फोड्ने र आफु शक्तिसाली बन्ने योजनाम रहेका दाहाललाइृ आफ्नै १५ निर्वाचित सांसदले माओवादी परित्याग एमाले भएपछि प्रचण्डलाई तनाव परेको हो ।
अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर केन्द्र र प्रदेशसभाका १५ जना सांसद एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभाका ४, राष्ट्रियसभाका २ र प्रदेशसभाका ९ जना गरी जम्मा १५ जना सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।